Manguddoonni Arsii Lixaa ajjeechaan akka dhaabatuu fi woraanni ummata irraa akka ka'u mootummaa gaafatan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Manguddoonni Arsii Lixaa ajjeechaan akka dhaabatuu fi woraanni ummata irraa akka ka’u...
Manguddoonni Arsii Lixaa ajjeechaan akka dhaabatuu fi woraanni ummata irraa akka ka’u mootummaa gaafatan
Kan hidhame hundi akka hiikamuu fi mirgi Oromoo guutummatti akka kabajamus gaafatu manguddoonni Arsii Lixaa. Yalii nagaa kamuu eegaluu dura haalduree 5 mootummaan kabajuu qabu tarreessaniiru.
Manguddoonni Oromoo Godina Arsii Lixaa aanaa Saashamannee, Kofale, Asaasaa, Ajjee fi Dodola irraa ta’an mootummaan Itoophiyaa tankaarfii suukkanneessaa ummata Godinichaa fi godinoota Oromiyaa biraa irratti fudhataa jiruu fi olola maqaa xureessaa Godinicha irratti geggeessaa jiru hatattamaan akka dhaabu gaafatan. Manguddoonni godinichaa daldaltoota, hojjattootaa fi hayyoota ufkeessatti ammate, laakkofsaan 15 ta’an, ergaa mootummaa Itoophiyaa fi Caffee Oromiyaaf akka dhaqqabu godhaniin kan yaaddoo isaanii ibsan, akka Ob.Muhaammad (maqaan abbaa akka hin dhayamne gaafate) miseensi manguddoo kanaa nutti himanitti.
‘Haalli godinni Arsii Lixaa naannoo torbaan lamaaf keessa jiru baay’ee yaachisaadha,’ jedhu Ob.Muhaammad. ‘Woraanni mootummaan bobbaase magaalaa Shaashamannee, magaalota biraa fi baadiyaalee hunda keessatti osoo hin hafin ummata nagaa gaafii mirgaa qabatanii daanditti bayan ajjeesaa, doorsisaa fi hidhaa kan jiru.’ Guyyaa mara kan argan yoo nammoonni ajjeefamani, kan dhagayan oduu gaddaati, akka Ob.Muhaammaditti. Wanti adeemutti jiru godinicha guutummatti zoonii woraanaati kan fakkeesse; dhiigaa fi imimmaan kan ganda hunda dhoqqeesse. Ob.Muhaammad, ‘Gama mootummaatiin kan arginu ibidda godinicha keessatti qabate irratti boba’aa firfirsuudha,’ jedhan. Sochii ummata hunda daangaa daangatti hirmaachise osoo argu mootummaan kan itti jiru hujii ukkaamsuu fi ummata gargar baasuuti. Hanga ammaatti milkiin tokko argamuu dhabus.
‘Gaafii fi fedhii ummataa, akkasumas wantoota hanga ammaatti ta’an ummata naannoo caalaatti kan hubatu hin jiru,’ jedhu miseensi manguddoota kun. ‘Ummanni mirga, haqaa, biyyaa fi qabeenya isaa tikfachuuf du’utti jira. Sochii kana irratti lubbuu Oromooti kan baye, qabeenya mootummaati kan barbadaaye. Dhugaan jiru kana ta’ee osoo jiru mootummaan Finfinnee taa’ee gaafii ummataa isa ‘amantaa kiristaanaa fi saboota biraa irratti xiyyeefate’ jechuudhaan olola badhaa geggeessuun waan hedduu fokkisaa fi maalalsiisaadha.’ Mootummaan federaalaa gaafii ummataa maqaa biraa itti baasuu fi ummata Arsii Lixaa xureessuun kan hedduu manguddoota kana gaddisiisee fi yaachise ta’uun hubatameera. ‘Kuni tuffii daangaa hin qabne,’ jedhu maadi keenna Ob.Muhaammad. Fulleen gaafii ummataa, akka Ob.Muhaammaditti, mirgaa fi kabajaa ufii deeffachuu; akkasumas qe’ee fi qabeenna ufii tikfachuudha. Labsiin manguddoonni baadiyaa Abaaroo ummata kumaatamatti laakkayamuuf dabarsan kanaaf ragaa guddaadha.
Mootummaan manguddoo godinichaa harkatti qabatuudhaan sochii ummataa dhaamsuudhaaf fiigicha guddaa irratti kan argamu. Mangudoonn godinichaa haalli gaddisiisaan (woraanni magaalaa fi baadiyaa keessatti ijoollee fi manguddoo ajjeesuu fi doorsisu) kuni bakka itti fufetti wanti isaan mootummaa woliin dubbatanii fi dirqamni jaarsummaa isaan fudhatan tokko kan hin jirre ta’uu ifatti angawootatti himaniiru. ‘Hunda dura gaafiin ummataa kan hunda keennaati. Kan OPDOtis; ufbeekan osoo ta’ee. Dhiigni daangaan maletti osoo jiguu fi drgaggoon iddoo hundatti osoo kufu mangudoonni arraba ‘sochii dhaabaa’ ittiin jedhan tokko hin qaban,’ jedhan Ob.Muhaammad. Tasgabbiin akka deebi’uu fi yaaliin jaarsummaa kamuu akka milkayuuf haalduree guuttamuu qaban jedhan manguddoonni Arsii Dhihaa tarreessanii mootummaa quba qabsiisanii jiru. Haaldureen kunniinis:
1ffaa- Ajjeechaa fi hidhaan akka dhaabatuu; akkasuma woraanni Arsii Lixaa fi guutuu Oromiyaa keessaa dafee akka bayu;
2ffaa- Namoonni manaa fi daandii irraa guuramanii hidhaman hundi akka hiikaman;
3ffaa- Gaafiin ummataa gaafi dhabamiinsa mirgaa, haqaa, wolqixxummaa, abbaa-biyyummaa, dimokraasii fi bulchiinsa gaarii ta’uu mootumman federaalaa fi kan Oromiyaa ifatti akka fudhatu;
4ffaa- Mootummaan ummata gaafii haqaa gaafatuu fi mirga isaaf dubbatu hunda akka yakkamtootaa fi gooli-uumtotaatti dhiyeesuu irraa akka ufqusatu
5ffaa-Mootummaan olola sochii godina Arsii Lixaa qabsoo amantaa fi saboota irratti xiyyeefate fakkeessuudhaan miidiyaaleen dhiyeessu hatattamaan akka dhaabuu fi xureessaa hanga ammaatti raawwatameefis ummata ifatti dhiifama akka gaafatuu kanniin jedhaniidha.
Ummanni godinichaa fi akkasumas Oromiyaan woliigalatti gaafii mirga fi haqaa gaafatanii daanditti bayanii jiru. Woreegamni addadda kaffalamaatiin jira. Gama mootummaatiin rifannoonnii fi dhamaainsi jiraachuu dubbatau ob.muhaammad. Adeemsi amma motummaan itti jiru, sochii adeemaa jiru xiqqeessuu fi maqaa addaddaa itti baasuun, rakkoo uumameef bifa kamiinuu fala ta’uu hin danda’u. ‘Sa’aa kanatti,’ jedhu Ob.Muhaammad, ‘Mootummaa fedhii nagaa fi tasgabbii argamsiisuu onnee irraa madde yoo qabaate ummata dhaggeeffachuu fi gaafii ka’aa jiraniif deebii laatuu qofa rakkoo uumameef falli waaree argamuu kan danda’u.’ Itti fufuudhaanis, ‘Fedhiin dhugaa fi murannoon cimaan rakkoo uumame furuu gama mootummaatiin jiraachuu kan barru deebii mootummaan haalduree manguddoonni godinichaa kaayaniif laatu irratti hundaayuudhaan.’ Akka hubannoo manguddoota godinichaa, haalli amma Arsii Lixaa fi guutuu Oromiyaa keessatti mudhatu kan ifatti argisiisu, manguddoota sossobuunis ta’ee sodaachisuun, fala waaree fiduu miti tasgabbii baatii tokkoo argamsiisu kan hin dandeenne ta’uu isaati kan Ob.Muhaammad dubbatan.
Mootummaan gaafii isaaniif deebii yoo hin laannee fi tufiitti xumura yoo hin goone ta’e, manguddoonni kuni ummata isaanii woliin ta’uudhaan hanga gaafiin ummataa hundi deebii argatutti kan mirga isaaniif falmatan ta’uu jala sararan. ‘Kan salphatee, jilbiiffate, hiyyoomatee fi qe’een irraa fudhatame hunda keenna,’ jedhu Ob.Muhaammad.
Previous articleHumni Agaazii hafuura fixachuu fi abdii kutachutti dhiyaateera
Next articleFunduratti malee duubatti; injifachuu malee jilbiifachuun Oromoo irraa kana booda hin eeggamu